फेब्रुअरीमा ५ ग्रहको संयोगले ५ राशिका जातकलाई बनाउँछ मालामाल ! – List Khabar
Home / रोचक / फेब्रुअरीमा ५ ग्रहको संयोगले ५ राशिका जातकलाई बनाउँछ मालामाल !
फेब्रुअरीमा ५ ग्रहको संयोगले ५ राशिका जातकलाई बनाउँछ मालामाल !
admin February 9, 2022 रोचक Leaveacomment 56 Views
काठमाडौँ : फेब्रुअरी २०२२ मा पाँच ग्रहहरुको चालमा परिवर्तन आउनेछ र साथै पञ्चग्रही योग पनि बन्नेछ। महिनाभर ५ ग्रहको गोचरसँगै मकर राशिमा ४ ग्रहको संयोगले केदार योग पनि निर्माण हुँदैछ। ज्योतिषाचार्यहरुका गणनाअनुसार फेब्रुअरी महिनाको सुरुवातमा मकर राशिमा सूर्य, बुध, चन्द्रमा र शनि ग्रहको संयोग बन्नेछ। मकर राशिमा शनि, मङ्गल र बुध ग्रहको मिलन हुनेछ। चन्द्रमा फेरि मकर राशिमा आउनेछ र शुक्र ग्रह पनि फेब्रुअरीको अन्तिमतिर मकर राशिमै आउनेछ। त्यसपछि पञ्चग्रही योगको संयोग बन्नेछ। पूरा महिनाभार ५ ग्रहको गोचरसँगै मकर राशिमा ४ ग्रहको योगले केदार योग निर्माण हुनेछ। यो महिना षड्ग्रह योगसँगै बुधादित्य योग, जीवात्मा योग, गजकेसरी योग र लक्ष्मी योग पनि बन्नेछ। जसकारण ५ राशिको भाग्य खुल्नेछ।
मेष राशिका जातकहरुलाई फेब्रुअरी महिनामा हुने ग्रह गोचरहरुले निकै शुभ फलहरु दिनेछ। यस कारणले जागिर र करियरमा अभूतपूर्व सफलता मिल्नेछ। अचानक धन लाभ हुन् सक्छ। बेरोजगार हुनुहुन्छ भने जागिर पाउने सम्भावना छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले फेब्रुअरी महिना शुभ साबित हुनेछ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुका लागि फेब्रुअरी महिना करियर र रोजगारीको दृष्टिकोणले निकै राम्रो साबित हुनेछ। रोकिएका कामहरुले पूर्णता पाउनेछ। भाग्यले भरपूर साथ दिनेछ। जागिरमा बढुवा हुने योग छ। व्यापारीहरुका लागि यो महिना विशेष लाभ दिने साबित हुनेछ।
कर्कट राशिका जातकको लागि फेब्रुअरी महिना अत्यन्तै शुभ साबित हुनेछ। करियर र जागिरमा विशेष सफलता मिल्ने सम्भावना छ। साथै धनदौलत पनि बढोत्तरी हुने देखिन्छ। यात्राको योग बनेको छ। व्यापारमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ।
धनु राशिक जातकले फेब्रुअरी महिनामा थुप्रै अवसरहरु पाउनेछन्। कार्यस्थलमा सकारात्मक परिणाम देख्नुहुनेछ। ऋणबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ। व्यापार व्यवसायमा धनसम्बन्धी समस्या हट्नेछ र जागिरमा बढुवा हुने योग छ। आम्दानी बढ्नेछ।
यो महिनामा ग्रह गोचरको प्रभावले तपाईको आम्दानी बढ्नेछ। अनावश्यक बहसबाट टाढा रहनुहोस् नत्र झैँ-झमेला पर्नुहुनेछ। चल-अचल सम्पत्तिबाट धन लाभको सम्भावना छ।
Previous यस वर्षकाे एसइई परिक्षा गर्ने मिति ताेकियाे, यस्ताे छ तयारी !